यो बर्ष धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले ह्रास – newsagro.com
यो बर्ष धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले ह्रास
December 9, 2015 December 10, 2015 NewsAgro0Comments Agriculture, crops, dr. suraj Pokhrel, JONAA Nepal Agricultural Journalists Academy Kathmandu, Moad कृषि विकास मन्त्रालय Ministry of Agriculture Development of Nepal, Nepal, Newsagro.com, paddy, rice
यो समाचार 356 पटक पढिएको
काठमाडौं, २३ मंसिर/ चालु आर्थिक वर्ष धानको उत्पादन १० प्रतिशतले घट्ने भएको छ । सरकारले गतवर्षको तुलनामा करिब १० प्रतिशत अर्थात ४ लाख ९० हजार मेट्रिक टनले धानको उत्पादन घट्ने अनुमान गरेको हो ।
गतवर्ष कसरव ४७ लाख ८८ हजार मेटिकटन उत्पादन भएकोमा यसवर्ष करिब ४२ हजार ९९ मेटिकटनमात्रै उत्पादन हुने कृषि विकास मन्त्रायको अनुमान छ । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. सुरज पोखरेलले समयमै रोपाइ हुन नसकी वाँझो रहेको जमिन, ढिलो सुरु भएको मनसुन तथा रासायनिक मलको ढुवानी समस्यालगायतका कारण उत्पादन घट्न गएको बताए ।
त्यसो त मन्त्रालयले कृषि प्रविधिको विकासका कारण तथा सिफारिस गरिएका धानका जातहरु तराइमा सावित्री, विन्देश्वरी, राधा ४ र १२, मध्य पहाडमा खुमल ४,१० र ११ तथा उच्च पहाडमा चन्दननाथलगायतको उत्पादकत्व स्थानीयभन्दा दोव्वर रहेकोले अनुमान गरिएभन्दा कम घटेको मन्त्रालयको दाबी छ । उल्लेखित जातका धानले ढाकेको क्षेत्रफल ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेकोले पनि धान उत्पादनमा थोरैले कमी आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसवर्ष धानखेती हुने कुल क्षेत्रफलसमेत गतवर्षको तुलनामा ६१ हजार हेक्टरले घटेको छ, जुन गर्षको भन्दा ४ प्रतिशत कम हो ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष करिब १५ जिल्लामा गतवर्षकै हाराहारीमा उत्पादन भएको छ भने १५ जिल्लामा बढेको छ वाँकी जिल्लामा उत्पादन घटेको छ । सहसचिव डा. पोखरेलले धान उत्पादनमा कमी आए पनि मकै उत्पादन भने बढेकोले खानेवानीमा परिवर्तन गर्नसकेमा खाद्य सुरक्षामा असर नपर्ने जिकिर गरेका छन् । धानपछिको दोस्रो प्रमुख खाद्यन्नवाली मकै गतवर्ष २१ लाख ४५ हजार मेटिक टनको तुलनामा यसवर्ष करिव ८६ हजार मेटिकटन अर्थात ४ प्रतिशतले बढ्न गई २२ लाख ३१ हजार मेटिकटन उत्पादन भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मकैको क्षेत्रफलसमेत करिब १ प्रतिशत अर्थात ९ हजार हेक्टरले बृद्धि भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । गँहुको उत्पादन बढ्नसक्ने भएकोले धानको कम उत्पादनले खाद्य सुरक्षामा समस्या नहुने बताए । त्यस्तै कोदोको उत्पादन भने घटेको छ । गतवर्षको तुलनामा करिब २ प्रतिशतले उत्पादन घटेर ३ लाख २ हजार मेट्रिकमात्रै हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । गतवर्ष ३ लाख ८ हजार मेटिकटन कोदो उत्पादन भएको थियो ।
त्यस्तै हिमाली जिल्लाको प्रमुख खाद्यन्नवाली फापरको उत्पादन पनि गतवर्षभन्दा केही बढेको छ । विगत ५ वर्षदेखि राष्टिय तथ्यांकमा समावेश गरिएको फापरवाली क्षेत्रफल १० हजार ८ हेक्टर रहेको छ भने ११ हजार ६ सय मेट्रिकटन उत्पादन भएको छ । फापरको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर एक मेटिकटन रहेको छ । नेपालका करिब ५० वटा जिल्लामा फापरखेती हुने गरेको छ ।
← इन्धन अभावले कुखुरा व्यवसाय संकटमा
मल अभावमा किसानले आलु रोप्न पाएनन् →